တောင်ကြီး ဂျီတီစီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » တောင်ကြီး ဂျီတီစီ
Posted by ဆူး on Oct 10, 2010 in History | 13 comments
တောင်ကြီး ဂျီတီစီ ကျောင်းပြိုတဲ့ ပုံလေး မမြင်ဘူးတဲ့ လူတွေ မြင်ရအောင်.. မေးထဲကနေ တဆင့် တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာတွေကို မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ဂျီတီစီတဲ့လား…ဆူးရေ
အင်ဂျင်နီယာတွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကျောင်းကိုက ပြိုတယ်ဆိုတော့ ……. သားသားမတွေးရဲတော့ဘူး သားအိမ်ဆောက်တဲ့အခါဆို လက်သမားပဲခေါ်တော့မယ် ….. ဟိ
အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းမပီးသေးတဲ့ လူတွေ စမ်းသပ်တဲ့ သဘောအနေနဲ့ဆောက်လိုက်ကြတာနဲ့ တူတယ်နော်….
ဟောဗျာ……။ပုံတွေကို တွေ့ရတော့ ကျွန်တော့်အဖေပြောတာကို သတိရတယ်။”မင်းတို့ယခုခေတ် အင်ဂျင်နီယာတွေကို ငါဘယ်တော့မှ ငါ့အိမ်ကိုမစောင့်ခိုင်းဘူးကွ”။
ဖြစ်ပုံကလည်း ဒီလိုဗျ—အဖေရဲ့ အဘွားက နယ်မှာနေတယ်လေ။အိမ်တလုံးကို အဖေကအဘွားမွေးနေ့မှာ လက်ဆောင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ အိမ်သာမပါဘူး။နောက်…..။အဖေ့အသုံးပြုနေကျ သူ့သူငယ်ချင်း ရှေးဟောင်း အင်ဂျင်နီယာကြီး ကမအားဘူးဖြစ်တော့လည်း နီးစပ်ရာအင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ ဂိုဒေါင်နဲ့အိမ်သာကို ဆောက်စေခဲ့တယ်။တော်သေးတာပေါ့ဗျာ အဲ့ အိမ်သာပြိုကျတယ်လေ……ဂိုဒေါင်လည်း နောက်တနေ့မနက်မှာ ပြိုကျတာပဲ။တော်သေးတယ်ဗျ အဘွားဘာမှမဖြစ်သွားလို့။အဲ့ဒါကြောင့် အဖေပြောတဲ့ စကားကိုကျွန်တော်တောင် လက်ခံရမလိုဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ အရမ်းတော်တဲ့ ခေတ်သစ် အင်ဂျင်နီယာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ အရင်သုံးက အင်ဂျင်နီယာအဟောင်းတွေကိုပဲ သဘောကျတယ်။ဒီ အင်ဂျင်နီယာကျောင်း ကြီးပြိုကျတာကို သိရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။။။သာမာန်လူ နားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ဗျာ။လက်စားမှုမရှိစေနဲ့ကိုယ့်ဖို့ မကြည့်နဲ့။ဘီလပ်မြေ မရောင်းစားနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဟီး ဟီး……။
ငလျင်လှုပ်လို့ပြိုသွားတာလား … သူ့အလိုလိုပြိုကျတာလားဟင် …
သြော်… အင်ဂျင်နီယာ လက်သစ်တွေ နေတဲ့ကျောင်းတဲ့လား။
ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့သူတွေ ဆောက်ရင် ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်လို့ ပြောချင်တာများလား။
တောင်ကြီး GTC ပြိုတာ ဘယ်တုန်းကလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဥပမာ ငလျင်သို့မဟုတ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လား။ အင်ဂျင်နီယာတွေဆောက်တာ အသုံးမကျလို့လား။ လူအသေအပျောက်ရှိလား။ ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိလို့ အရေးယူထားလဲ။ မေးခွန်းတွေများသွားလားမသိဘူး သတင်းရရင်တင်ပေးပါဦး။
ဒီပုံတွေကို ဂျာနယ်သတင်းပို့ရင်တော့ ကောင်းမှာ..။ ဒါပေမဲ့ စာပေစီစစ်ရေးက ဖြတ်မှာ သေခြာပါတယ်။
ကြာတော့ကြာနေပါပြီ။ အခုမှ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိလို့ ကော်မင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မက တောင်ကြီး ဂျီတီစီမှာ တက်ပါတယ်။ ဒီသတင်းက မှားနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကျောင်း ဒီလို တစ်ခါမှမပြိုဖူးပါဘူး။ ဂျီတီစီကျောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မတို့ တောင်ကြီးကျောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးဖတ်နေကြတဲ့ စာဟာ သတင်းမှား မဖြစ်သင့်လို့ အသိပေးလိုက်တာပါ။ စာရေးသူကို တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။